अध्यादेशले कांग्रेसपनि विभाजन, रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्दै !
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » अध्यादेशले कांग्रेसपनि विभाजन, रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्दै !
काठमाडौ । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि यसको तरङ्ग नेपाली काँग्रेसमा पनि देखिन थालेको छ ।
यसैले स्वयं नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पहिले यो अध्यादेश निष्कृय पारेर मात्र सरकार विस्तार गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।
यही बेला सरकारलाई पूर्णता दियो भने आफ्नै पार्टीका सांसदहरु जसलाई चित्त बुझ्दैन उहाँहरु पार्टी विभाजन गरेर जान सक्ने देखिएकाले उहाँ केही दिन मौन हुनुहुन्छ ।
uml chairman kp oli and nepali congress leader ramchandra paudel
आज सत्तारुढ गठबन्धनको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग यस्तो बृफ गर्नुभएको श्रोतको दावी छ ।
एमाले र जसपा फुटाउन ल्याएको अध्यादेशले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आफ्नो पार्टी पनि फुट्ने देखिएपछि अहिले निक्कै सकसपूर्ण अवस्था छ ।
एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याएरका देउवा अहिले आफ्नै कर्मका कारण ठूलो तनावमा रहेको श्रोतको दावी छ ।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता शेखर कोइराला मिलेर नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारी थालेको श्रोतले पुष्टि गरेको छ । त्यसका लागि उहाँहरुले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको पुष्टिी भएको छ ।
पौडेल र कोइरालाले बुधबार साँझ ओली निवास बालकोट पुगेर भेटघाट गरेको खुल्न आएको छ । विश्वस्त श्रोतका अनुसार यी दुई नेताहरुले आज पनि ओलीसँग सम्वाद गर्नुभएको छ ।
बारम्बार छलफल चलिरहेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश र एमाले विभाजन भएसँगै ओली र पौडेल–कोइरालाबीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
ओलीलाई भेट्न दुवै नेता बुधबार ५ बजे बालकोट पुगेको बालकोट श्रोतले पुष्टी गर्यो । देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी वा सांसद लिएर दल विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कांग्रेस नेता कोइरालाले देउवाले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ ।
उच्च श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार काँग्रेस फुटाएर आएमा रामचन्द्र पौडललाई प्रधानमन्त्री बनाएर जानेसम्मको तयारीमा ओलीले रणनीति बनाएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि पौडेलले ओलीलाई भेटेको पौडेल निकटले पुष्टी गरेको छ ।
१७ औ पटकसम्म प्रयास गर्दापनि प्रधानमन्त्री हुन नपाउँनुभएका पौडेलले यो जीवनमा एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा राख्नुभएको छ । त्यो इच्छा ओलीको तर्फबाट पूरा हुने भएकाले यो छलफल चलिनै रहेको देखिन्छ ।
देउवाले अध्यादेश ल्याउने वित्तीकै ओलीले काग्रेसलाई पनि महंगो पर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो भने काग्रेस नेता शेखर कोइरालाले तत्काल अध्यादेशको कडा विरोध गर्नुभएको थियो ।
रामचन्द्र पौडेलले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भए पार्टी विभाजजन गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको श्रोतको भनाई छ ।